Indlela eya kuNguquko | Martech Zone
Indlela eya kuNguquko
NgoMvulo, Julayi 30, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Kukho inkqubo yokuphumeza isicwangciso sokuthengisa esingenayo, ukuvavanya eso sicwangciso, nokuphucula isicwangciso. Ngelishwa, iinkampani ezininzi azizalisekisi isicwangciso esipheleleyo ngaphambi kokuzishiya kwaye zibuyele kwidola ephezulu, kwimizamo yokuthengisa imveliso ephantsi. Isicwangciso esili-intanethi esifanelekileyo sifuna isicwangciso esiliqili sokuvelisa iziphumo eziphezulu.
Indlela ekhokelela kuguquko ihlala ibonakala ngathi ayinakufikeleleka kubathengisi. Nokuba kudala ukubandakanyeka, amava agxile kuguqulo okanye ukwenziwa kwesicwangciso sovavanyo esinefuthe- ukuba nemephu yendlela ephumelelayo yomceli mngeni kude kube ngoku.
Ion Interactive's infographic yamva nje Icacisa indlela eya kuguquko ukusuka kubhengezo lwentengiso yokuqala kwisicwangciso sasemva kokuguqulwa
Intengiso yeShishini leNkonzo kufuneka ibandakanye uLuhlu lukaAngie